Ambo: Ilfee Haadha Sabboontotaa- Cichituu akka sibiilaa kan dantaa fi faayidaan kaayyoo Oromoo irraa hin maqsine!! Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAmbo: Ilfee Haadha Sabboontotaa- Cichituu akka sibiilaa kan dantaa fi faayidaan kaayyoo Oromoo irraa hin maqsine!!
Amboo fi ABO-Deeggarsa Jaalalaa
Iddoo fedhiin ofiin deeggarsaa bahanitti, gamamchuun guddaa dha! Guyyaan akkanaa akka dhuufufis, wareegamni hedduu baafamaa jira.
Galanni kan qabsaa’ota Oromoo ti!
Jaal Gadaa Gabbisaa (qondaala ABO) haasaa baninsaa taasiseen sagantaan Amboo eegalee jira.
Waltajjii Marii stadium Magaalaa Ambootti guyyaa har’aa gaggeeffamuuf jedhu irratti Qondaaltotni ABO yeroo ammaa magaalaa Amboo galanii jiru.Sagantaan KFO fi ABOn qopheeffate sa’aa muraasa eegala.
Wal argaan stadium magaalaa Ambootti haa tahu.
Amboo fi ABO: Ragaan ummata keenya fedhii fi jaalalaan Istaadiyeemiin Amboo guutaa jira. Uummanni bakka qabatee hogganoota keenya eegaa jira!!
Obboloota jaal Laggasaa Wagii waliin magaalaa Ambootti.Lammii Beenyaa
(SBO – MUDDEE 15,2019) Studiyemii AMBO irraa kan amma nu dhaqqabe.